Buri oo si adag uga digay in Safaaradaha iyo Xafiisyada Wasaarada uu saameeyo Khilaafka president Xassan iyo C/weli - Wargeyska Faafiye
Buri oo si adag uga digay in Safaaradaha iyo Xafiisyada Wasaarada uu saameeyo Khilaafka president Xassan iyo C/weli
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga H.E. Buri’ Mohamed Hamza ayaa ku booriyay agaasimayaasha waaxyaha Wasaaradda iyo Safiirada Soomaaliya inay dardar geliyaan howlaha qaranka ay u hayaan oo aanu saameyn khilaafka ka dhexjira dowladda Federaalka Soomaaliya.
Buri’ Mohamed Hamza oo kulan degdeg ah isugu yeeray Kusimaha Xoghayaha Joogtada , agaasimayaasha waaxyaha iyo Lataliyeyaasha Wasaaradda ayaa sheegay inay muhiim tahay horumarinta shaqada , xoojinta iskaashiga iyo la xisaabtanka Safaaradaha iyo Qunsuliyadaha guud ee Soomaaliya ay ku leedahay dibadda .
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga waxa uu yiri “ waxaad tihiin shaqaale joogta ah oo u xilsaaran hagidda howlaha qaranka ee dibadda , waxaa la idinka doonayaa inaad fududeysaan adeegyada iyo iskaashiga idinkala dhaxeeya Wasaaradaha kala duwan ee dowladda , Xafiisyada Ururada , hey’adaha iyo Safaaradaha shisheeye ee ka furan dalka Soomaaliya”.
Kulankan oo aragtiyo kala duwan la isku dhaafsaday ayaa ku soo idlaaday jawi guul ah.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsZimmerman's lawyers QuitWali iyo amni darrada Afgooye.Somaliland targets oil and gas investors3 qof oo harraad ugu geeriyootay Galgaduud.Al-Shabab oo qoraneysa carruur yaryar